Singapora : Fanentanana “Vonjeo ny tontolon’ny feso mampalahelo” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2011 12:32 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, polski, বাংলা, Español, English
Ity ny fampidirana tamin'ny fanentanana ‘Vonjeo ny tontolon'ny feso [dauphins] mampalahelo” any Singapora:
Feso 25 niriaria amin'ny maha [biby] dia azy ireo tany amin'ny Ranomasimbe Pasifika no miatrika fiainana sarotra , fahasorenana, adin-tsaina, tsy fahazakana toerana mihidy, noho ny ataon'ny Resort World, rehefa nosamborina sy nogadraina, izay manangona azy ireo ao amin'ny dobo manokana any Sentosa, Singapora. Anankiroa amin-dry zareo no efa maty nandritra izay dingana namindrana azy ireo izay. Miangavy indrindra mba vonjeo ireto biby sisa tavela ireto.
Ny fanentanana dia miantefa amin'ireo tia biby rehetra hanerena ny mpitantana ao amin'ny Resort World hamotsotra ireo feso nosamboriny:
Ny zavatra ataon'ny Resort World ao Sentosa amin'ireto feso ireto dia ampy nanakorontanana izay rehetra tia biby.
Ny feso, raha tsy fantatrao, dia zavamanan'aina tsy misara-mianakavy fa miara-mipetraka daholo izy fianakaviana iray manontolo.
Manjombona ny ho avin'ireto feso ireto. Anjarantsika mpitia biby no miantso ny Resort World hieritreritra tsara amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny hisambotra ireto biby ireto.
Miangavy ny Resort World mba handefa ireto feso ireto malalaka. Miangavy mba ampiakaro ny feonao ka tohano izahay.
Eto ambany ny sarimiaina tao amin'ny YouTube hanohanana ny fanentanana:
Avaaz.org, vondrona maneran-tany tsy mitady tombontsoa, manohana fanangona-tsonia
Fanangona-tsonia ho an'ny Resort World:
Miangavy anareo izahay hamotsotra ireo feso dia nosamborina ireo, ajanony ny fanaonareo mividy feso nosamborina, tohano ny ezaka rehetra hanajanonana ny fihazana sy fisamborana ny feso dia.
Angamba mety hihaino ity antso fanangonan-tsonia ity ihany ireo mpitantana tahaka ny nataony roa taona lasa izay ka nanafoanany ny fampisehoana antsantsa sy trozona saika nataony vokatry ny hamaroan'ny olona nandà izany tetikasa izany:
Voatery nanajanona ny tetikasany hampiseho antsantsa sy trozona ny Resort World roa taona lasa izay noho ny fahatezeran'ny olona ka mety nanimba ny lazany. Atambaro ny antsontsika androany hamotsorana ireto biby manan-tsaina sady mahafinaritra ireto – ary ity no kihon-dalana amin'ny ady hanajanonana ny fivarotana feso dia. Hatolotra ny Resort World sy ny media ny sonia voaangontsika. Soniavo àry ka zarao amin'ny olona rehetra!
Sary ao amin'ny facebook nalefan'i Pearlyn Cheong
Indreto fanehoan-kevitra tao amin'ny bilaogy. Avy amin'i Otterman Speaks:
Raha ny hevitro manokana, ity tetikasa hamoahana ny feso eny amin'ny peta-drindrina ity no fanamby amin'ny maha firenena antsika. Mizotra mankany amin'ny làlana hijery feso mitsambikina ao anaty dobo ve isika?
Mandreraka be ny maheno indray ireo fikan'antitra tamin'ny taona 80 sy 90 mikasika ny fikarohana sy fitadiavana tombotsoa manokana amin'ny fisamborana feso. Ireo aretina tsy maintsy sedrain'ny ranomasimbe anefa tsy hanampy velively amin'izany.
lekowala! Manakiana ny tetikasa mikasika ireo feso apetraka anaty ‘dobo fisarihana’ mpanjifa:
Inona no tena ao an-tsain'ny RWS? Na inona na inona, ahoana no mahatonga azy ireo hitady fanalan-tena amin'ny hoe ampiasaina any amin'ny “dobo fisarihana” mpanjifa ny feso hanasitranana ireo ankizy marary sy sembana. (Tsy mihambahamba aloha aho milaza fa ny feso dia mampifalifaly ny rehetra kanefa kosa tsy rariny raha nosamborina izy ireny). Raha tena madio ny RWS amin'ity resaka ity, dia tokony ho natolony tany amin'ny hôpitaly, na fitaizana be antitra sy ny fikambanana hafa mitovy amin'izany ny tetikasany satria ireny no tena mila ampifaliana fa tsy ny toerana mihidy izay ny sakafo sy ny fialam-boly no fotom-pisiany – ary tafiditra ao anatin'izany ny kilalao.